Mina Reap cambodia - nzvimbo, mahotera, mamiriro ekunze, airport, zvinhu zvekuita
Mina Reap ndiro guta guru reIndia Reap Province kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweCambodia. Iro guta rakakurumbira resort uye gedhi kune iyo Angkor mudunhu.
Sod Reap nhasi kuve inozivikanwa nzvimbo yekushanya ine mahotera akawanda, nzvimbo dzekudyira, maresitorendi, uye mabhizinesi ane hukama zvakanyanya nezvekushanya. Izvi zvinokweretwa kusvika padyo netembere dzeAngkor, ndiyo inonyanya kufarirwa nevashanyi muCambodia.
Ndeipi Siem Reap?
Mina Reap, zviri pamutemo Minareap idunhu reCambodia, riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweCambodia. Inotenderera matunhu eOddar Meanchey kuchamhembe, Preah Vihear uye Kampong Thom kumabvazuva, Battambang kumaodzanyemba, uye Banteay Meanchey kumadokero. Guta rayo guru uye guta rakakura iIndia Reap. Ndiyo nzvimbo huru yekushanya muCambodia, sezvo riri iro guta rakanakisa kumatembere anozivikanwa eAngkor
Nei kushanyira Mina Reap?
Kune yakasvibira, mararamiro uye tsika. Asi Chikonzero chikuru chekuuya kuIndian Reap kushanyira temberi dzinoyevedza dzeAngkor Wat, chivako chikuru chechitendero munyika, pane saiti inoyera mahekita e162.6. Pakutanga yakavakwa seTembere yechiHindu yakatsaurirwa kuna mwari Vishnu weHurumende yeKhmer, yakashandurwa zvishoma nezvishoma kuva tembere yechiBuddhist kusvika mukupera kwezana remakore re12th.
Ko Mina Reap yakachengeteka?
Mina Reap pamwe ndiyo yakachengeteka nzvimbo yekuCambodia. Yazova mushanyi hotspot uye caters maererano. Nepo hupombwe husina kusarudzika, husina kujairika, kana munhu ane hunhu pamusoro pavo mumwe uchave akachengeteka.
Kusvika riinhi kugara muSky Reap?
Mina Reap haigone kuvharwa nezuva rimwe. Iwe unozoda mazuva matatu kana mana kuti ufukidze nzvimbo huru yeAngkor tembere uye nezvimwe zvinokwezva munzvimbo iyi.
Nguva yekushanyira Mina Reap?
Vanoshingairira vafambi vanokuudza kuti hapana imwe nguva yakaipa yekushanyira Mina Reap. Ndechipi chiri chokwadi chechokwadi, chero bedzi iwe uchichinja-chinja nemashandisiro aunoita nguva yako kana iwe wasvika pano.
Mwaka wekupisa unotenderera kubva muna Zvita kusvika muna Kubvumbi, ukuwo monsoon kubva muna Chivabvu kusvika Nyamavhuvhu inounza mvura yakanyorova uye yakanyorova nyoro.
Nguva yakanakisa yekushanyira Mina Reap iri muna Zvita naJanuary, kana mazuva acho zuva rave nezuva uye rakaoma. Ingo ziva kuti ino ndiyo mwaka wepamusoro wevashanyi, saka uchaiwana yakazara vanhu kwese kwese uye mitengo ichave yakakwira.
How far is the beach from Changa Reap?
Siem Reap haina mhenderekedzo yegungwa. Mhenderekedzo dzeCambodia dzinowanzo kuregererwa mukufarira Thailand. Asi zvishoma nezvishoma, chokwadi, zvitsuwa zvemunyika uye jecha jena rinopenya reSihanoukville zvave kuzivikanwa kune vanofarira mhenderekedzo dzepasi.
Iyo nzvimbo kubva kune Mina Reap kuenda kuSihanoukville iri kutenderera 532km (350 mamaira) nemugwagwa. Imhaka yeiyi kureba kwekufambisa (10-15 maawa nenzira) iyo vafambi vazhinji vanosarudza kusaenda kuSihanoukville zvachose. Chinhu chakanyanya kukurumidza kutora ndege, iyo inotora 1 awa.
Pakati pezviviri zvakakurumbira kuenda kuCambodia, Mina Reap inoita senge iri nani nzvimbo yekuzorora. Nepo Phnom Penh ichimiririra shanduko, Mina Reap inotora hunyanzvi hwekuchengetedza. Mina Reap ingaratidzika senge musha wemvura mukuenzanisa nePhnom Penh maererano nemikana yekutengesa.
Mina inokohwa kusvika phnom penh: 143 mamaira (231 km)
Paunenge uchifamba kubva kuPhnom Penh uchienda kuOri kukohwa une 4 dzakasiyana sarudzo:
Unogona kutora bhazi - maawa matanhatu
Shandisa zvishoma uye tora tekisi - maawa matanhatu
Bhuka ndege - 50 maminetsi
Tora chikepe chinayambuka Tonle Sap Lake- 4 kusvika maawa 6
Sod Reap kuThailand
Bangkok yekufamba chinhambwe inenge 400 km.
Pakati pemaguta aya pane mamwe akavimbika makambani emabhazi, uye unogona kutora:
Bhazi rakananga kubva ku Mina Reap kuenda Bangkok. (6 kusvika 8 maawa)
Bhuka ndege - 1 awa
Sod Reap kuVietnam
Kufamba chinhambwe kubva kuSaigon kuenda kuIndia Reap ndeye 600 km nevhu.
Kubva Ho Chi Minh iwe unogona kufamba:
Nebhazi (gumi nemaviri - makumi maviri maawa, zvinoenderana nekumira muPhnom Penh)
Iwe unogona bhuku ndege yakananga (1 awa)
Indian Reap Hotera
Pane mazana e mahotera muSky Reap. Tsika kana zvazvino, kwevashoma kana kusingagumi bhajeti, kubva kuimba yevaenzi kuenda ku5 nyeredzi hotera, munhu wese achawana mufaro.
Indian Reap airport
Mina inokohwa airport code: REP
from airport to Angkor Wat: 17 maminitsi (5.8 km) kuburikidza Airport Road
kubva kunhandare yendege kusvika pakati peguta: 20 - 25 maminetsi (10 km)
Paunenge uchifamba iyo 9km chinhambwe kubva kune Mina Reap Airport kuenda pakati peguta, iwe une 3 sarudzo:
Tekisi ine mota
siem kukohwa airport